Semrush na-eme ka ndị na-asọ mpi na-akwụ ụgwọ kwa ụbọchị | Martech Zone
Anyị abụwo ndị Fans na ndị mmekọ nke Semrushruo ọtụtụ afọ ugbu a. Ha na-aga n’ihu ịkwalite onyinye ha na ịgbatị ikike ijide data ha, na-enye nghọta dị ịtụnanya na nhụta njin ihu igwe nke ndị ahịa anyị. Na nso nso a, Semrush enwekwukwa ha Lezienụ kwa Pịa akuko - n'inye nkọwa doro anya na akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ ndị ị na-asọmpi na azụmaahịa nyocha injin ụgwọ.
Nke a bụ atụmatụ ndị bụ isi nke nkwalite akụkọ Adsense kwalite:
Mgbasa Ozi Adsense - Nke a na - enyere gị aka ịmata ma ndị asọmpi gị na-eji Adsense ma ọ bụ na ọ bụghị ma nye nghọta nke ọrụ ha gara aga.
Ofdị ndị Mgbasa ozi Mgbasa ozi na-eji - The achịcha chaatị na-eweta na-a-ilekiri data banyere Mgbasa ozi esighi na gị asọmpi na-eji ọtụtụ. Site na ịpị otu ụdị mgbasa ozi ị ga-ezigara na akụkọ zuru ezu.
Ndepụta ngalaba ebe a na-ebipụta Mgbasa ozi - Chọgharịa na ebe nrụọrụ weebụ ndị asọmpi gị na-eji iji kwalite Adsense ha. Ou nwere ike ịhụ akụkọ zuru ezu na ọnụọgụ Mgbasa ozi gosipụtara na weebụsaịtị ọ bụla.
Nyochaa Ederede Asọmpi Ndị Asọmpi - Mụọ ederede nke ndị na-asọmpi gị 'na-ebipụta na Adsense, zuru omume kacha mma, ma gbanwee ha maka mkpọsa gị n'ọdịnihu.
Nyochaa Media Mpi - Ugbu a ị nwere ike ịmata nke ọma ụdị ụdị mgbasa ozi ndị asọmpi gị na-eji ma ị nwere ike ịhụ ngwaahịa ndị a na-akpọsa na ọkọlọtọ ha.
Nyochaa peeji nke ọdịda mpi - Mụtakwuo maka ibe ọdịda nke ndị asọmpi iji bulie arụmọrụ Adsense gị. Na Semrush, i nwekwara ikike ịchọpụta ndị kasị ewu ewu.
Tags: asọmpi mgbasa ozinyocha asọmpichọta ppc ndị asọmpimbido peeji nkeakwụ ụgwọ ọchụchọ mgbasa oziụgwọ ederede ederedeppc asọmpi mgbasa ozippc mpi ọdịda peeji nkeppc ndị asọmpippc na-akukoederede mgbasa ozi
Agwawo m ọtụtụ ụlọ ọrụ PPC, mana ihe kachasị mkpa ị nwere ike ime maka mgbasa ozi ahịa gị bụ iweta peeji. Gbalịa chọpụta nsonaazụ ụlọ ọrụ a, kpọọ ha na 256-398-3835. Ha bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa kachasị mma ị ga-eso ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị na ha mepụtara mkpọsa ppc siri ike maka gị, kamakwa ha na-eme peeji ọdịda, CRO na ntugharị bụcha ihe niile dị mkpa 100% nke mgbasa ozi ịntanetị na-aga nke ọma. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ere gị 1 otu ihe dị ka CRO, ma ọ bụ naanị PPC, ma ọ bụ naanị popups, wdg. Nke a bụ kpam kpam ludicrous n'ihi na mgbe 1 ihe nwere ike ime ka a dị iche na a mụ ahịa mkpọsa, ọ dịghị otu mmewere na bụ a anam ma ọ bụ ezumike mmewere na ntanetị n'ịntanetị, ịchọrọ ngwugwu niile, wee hone / bulie site ebe ahụ.